Kedu ka m si emeso ike ọgwụgwụ n'oge mmega ahụ? - Mmega
Isi > Mmega > Ike gwụrụ n'oge mgbatị - otu esi edozi
Ike gwụrụ n'oge mgbatị - otu esi edozi
Kedu ka m si emeso ike ọgwụgwụ n'oge mmega ahụ?
Post-mgbatị ike ọgwụgwụnwere ike ịbụ ihe si n'ọtụtụ ihe, mana ozi ọma ahụ bụ ịlụ ọgụike gwurumgbe arụpụtanwere ike ịdịtụ mfe.
Emegharịla onwe gị ike.
Rinkụọ mmiri tupu ị rụọ ọrụ.
Rie nri mgbe ị rụchara ọrụ.
Ha na-ebuli ibu. Oge nke mbụ ọ na-adị mfe, mana mbuli elu ọ bụla na-achọkwu mgbalị ruo mgbe ị gaghị enwe ike ịga n'ihu. Na ogwe aka gị, akwara ndị na-ebuli elu nwere ike agaghị agbatị ọzọ.
Gịnị mere ike akwara anyị ji ada mba? Anyị na-ata ụta ụta lactic acid ma ọ bụ enweghị ume, mana naanị ihe ndị a anaghị akọwa ike ọgwụgwụ. E nwere ihe ọzọ dị mkpa: ike ahụ ịzaghachi na mgbaàmà sitere na ụbụrụ. Iji ghọta mgbọrọgwụ nke ike ọgwụgwụ, ịghọta ihe kpatara ike ọgwụgwụ anụ ahụ na-enyere aka ịghọta etu akwara si arụ ọrụ na nzaghachi na mgbaàmà sitere na akwara.
Ihe mgbaàmà ndị a na-esite n'ụbụrụ gaa akwara n'akụkụ dị nta nke abụọ site na mkpụrụ ndụ ndị dị mkpụmkpụ, ndị a na-akpọ moto neurons. Mkpụrụ ahụ na-arụ ọrụ na mkpụrụ ndụ akwara na-ekewapụ site na obere ọdịiche, na mgbanwe nke mkpụrụ akụkụ gafee ọdịiche a na-enyere mkpi aka. N’otu akụkụ nke ọdịiche ahụ, ụbụrụ neuron ahụ nwere neurotransmitter a na-akpọ acetylcholine.
N'aka nke ọzọ, ihe ma ọ bụ ion e boro ebubo na-ekpuchi akpụkpọ ahụ nke sel akwara: potassium dị n'ime na sodium na mpụga. Na nzaghachi nke mgbaàmà sitere na ụbụrụ, moto neuron na-ewepụta acetylcholine, nke na-ebute pores na akwara cell ahụ meghere. Sodium na-asọpụta na potassium na-apụ apụ.
Uzo nke ihe ndia ebubo bu ihe di nkpa na nkpuchi aru: ngbanwe nke ugwo na emeputa onodu eletriki nke anakpo ikike nke na-agbasa site na sel muscle, na-akpali mkpalite nke calcium echekwara na ya. Iju mmiri a nke calcium na-eme ka uru ahụ rida site na ime ka eriri ndị dị n'ime akwara rụọ ọrụ wee kpọchie ọnụ, na-adọta akwara ahụ. Ike e ji akwalite mkpụmkpụ sitere na molekul a na-akpọ ATP.
ATP na-enye aka ịghachite ion azụ n'akụkụ akpụkpọ ahụ, na-eme ka nguzozi nke sodium na potassium n'akụkụ abụọ, usoro nke na-emeghachi onwe ya oge ọ bụla akwara na-eme. Site na nkwekọrịta ọ bụla, ume dị n'ụdị ATP na-erepịa ihe, a na-emepụta ngwaahịa ndị na-abaghị uru dị ka lactic acid, ụfọdụ ion na-apụkwa na akpụkpọ ahụ akwara, na-ahapụ otu obere ìgwè. Ọ bụ ezie na mkpụrụ ndụ akwara na-eji ATP eme ihe mgbe ha na-eme nkwekọrịta ugboro ugboro, ha na-emepụtawanye ọtụtụ, yabụ ọbụlagodi akwara ike gwụrụ anaghị agwụcha ọtụtụ oge.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ihe mkpofu bụ acidic, ike gwụrụ ike ka na-eme ka pH larịị n'etiti oke oke, na-atụ aro na anụ ahụ na-ewepu ion ion calcium a n'efu, nke na-abịa ozugbo n'akụkụ akwara cell ahụ iji tọgharịa usoro ahụ nke ọma. Ọbụlagodi mgbe ụbụrụ na-ezipụ mgbaàmà, sel akwara enweghị ike iwepụta ihe omume dị mkpa maka mwepụ. Ọbụna mgbe ion ndị dị ka sodium, potassium, ma ọ bụ calcium n’ime ma ọ bụ gburugburu akwara na-agwụcha, ion ndị a bara ụba n’ebe ọzọ n’ahụ.
Obere oge, ha na-agaghachi na mpaghara ebe a chọrọ ha, mgbe ụfọdụ site na enyemaka nke sodium na nfuli potassium. Yabụ mgbe ị kwụsịrị ma zuru ike, ike ọgwụgwụ ahụ ike ga-ebelata ka ion ndị a na-ejupụta n'ime akwara ahụ niile. Ka ị na-emega ahụ oge niile, ọ ga - ewe ogologo oge iji mee ka ike gwụ gị na oge ọ bụla .Ọ bụrụ na ị dị ike, ọ ga-eme ka usoro mgbarụ akwara si ụbụrụ pụta na-eme ka uru ahụ dị ugboro ugboro iji bulie ụfọdụ ego. nke ibu ibu.
Ole na ole okirikiri pụtara iji nwayọ ion nwayọ nwayọ. Ka ahụike gị dị mma, ị nwere ike ịzụ ogologo oge n'otu ike ahụ. Ọtụtụ mọzụlụ na-etolite site na mmega ahụ, akwara buru ibu nwekwara ụlọ ahịa ATP ka ukwuu yana ikike dị ukwuu iji wepu ihe mkpofu, nke na-eme ka ike ọgwụgwụ gwụ n'ọdịnihu.
Kedu ka m ga-esi nweta mgbatị ahụ?
Ma mgbe ị rụchara ọrụ ahụ niile, ị gaghị eche na ị na-eme ka ihe ịga nke ọmarụpụtan'ihi enweghịume.
Lee ihe ise dị mma-rụpụtaihe oriri iji nyere gị aka ịkwalite gịumetupu arụpụta.
Almọnd Bọta. Dị Mfe.
Blueberries. Inwe ụdị shuga kwesịrị ekwesị nwere ike inyere gị aka ime nke ọma na mgbatị ahụ.
Yogọt nke Greek.
Yabụ na ị nweghị ume, ike gwụrụ m nwetara ya, mana ozi ọma ahụ dị n'isiokwu a n'izu a, m ga-akụziri gị otu esi ejigide ọkwa ike ahụ ka anyị bido site na ụdị ndụ ugbu a na 24/7-ụwa taa anyị na-achọkarị ịba ụba na ndụ anyị anyị anaghị ata ahụhụ n'ihi na anyị malitere ichefu ilekọta onwe anyị. Ugbu a, tupu anyị amalite ị gafere ndụmọdụ a, achọrọ m ka ị chee maka ajụjụ ole na ole a, yabụ kedu nri gị, ọ dị mma? You na-eri ọtụtụ mkpụrụ osisi, na-eri ọtụtụ akwụkwọ nri, na-ehi ụra nke ọma, na-eri nri n'oge, na-a drinkụ mmanya na-aba n'anya, na-a aụ ọtụtụ caffeine, na-a drinkụ ọtụtụ ihe ọ energyụ energyụ ike, yabụ biko chee echiche banyere ya ka anyị na-agabiga Ndụmọdụ Ndụmọdụ Ndụ Ndụmọdụ Otu Otu Eleghị anya, ihe kachasị mkpa bụ na ị ga-agba mbọ hụ na ị nwere nri ahụike, nke ziri ezi maka na nke a bụ ntọala maka ike gị, yabụ ọ bụrụ na ị ga-eri ọka niile, ị ga-enwerịrị Ndị na-edozi ahụ werekwa onwe gị, ịchọrọ mkpụrụ osisi, ịchọrọ akwụkwọ nri, mana ọ naghị adị mfe ịkọwa n'ime edemede a dị mkpirikpi. Ọ dabara nke ọma na NHS nwere ezigbo akụkọ gbasara etu esi enweta nri na-edozi ahụ, m ga-ahapụ njikọ na nkọwa dị n'okpuru ebe a na m ga-akwado onye ọ bụla gụrụ naanị iji jide n'aka na ị na-eme ihe niile dị mma Ndụ -Tip nọmba abụọ n'ụzọ, Echere m na oriri a dị ntakịrị ma enwere ihe kpatara ya ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ọ ga-adị mma n'anya, e na-eme mgbe niile ma ọ bụrụ na ị na-eme ya, ọ ga-enyere ike ike gị aka ma ọ bụghị na-atụ uche nri ụtụtụ dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke anyị nke a bụ nke atọ, ị na-atụ uche ya na nke ahụ agaghị enyere aka ịnọgide na-enwe ogo ume wee rie nri atọ kwa ụbọchị n'oge oge niile na oge ọ bụla agụụ na-agụ gị n'etiti na Na ọnọdụ maka obere nri, nwee somefọdụ mkpụrụ osisi dị mma Ndụ Ndụmọdụ Ndụmọdụ Atọ Rie nri bara ọgaranya maka iron n'ihi na ogo gị pere mpe, ike gwụrụ gị.
Nke a dị ezigbo mkpa ugbu a na ndị nọ n'afọ iri na ụma na ụmụ nwanyị n'ihi na ị nọ n'ihe ize ndụ dị elu nke ịhapụ iron n'ọbara ịhụ nsọ gị n'oge oge gị, ka anyị nọdụ na oche maka akụkụ ọzọ. Ozi ọma ahụ bụ na e nwere ọtụtụ nri dị elu nke igwe dịka anụ uhie, akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, yana nri ewusiri ike dị ka mkpụrụ ọka M ga-ahapụrụ gị ndepụta zuru ezu na nkọwa dị n'okpuru. ND TMỌD Number Nọmba Anọ Na-edebe Mmiri nke Ọma? Anyị na-a glassesụ iko mmiri isii ma ọ bụ asatọ kwa ụbọchị ma, n'ụzọ, nke a bụ mgbakwunye na mmiri mmiri anyị na-eri na nri anyị.
Ikwesiri ileba anya ị alcoholụ mmanya gị n'ihi na nke a nwere ike ibute akpịrị ịkpọ nkụ na caffeine yana ọ ga-enye gị ike ahụ, mana ka oge na-aga, ị ga-ewulite ndidi na ị ga-achọkwu caffeine iji debe onwe gị otu ike ahụ ma ọ bụrụ ị gaghị enweta ike gwụ gị ma biko cheta na mmanya na caffeine ga-emetụta ogo ụra gị nke mere na ọnụ ọgụgụ ise a na-ebi ndụ ga-eme ka ike gwụ gị ogologo oge. Ya mere belata shuga n'ozuzu ugbu a anyị maara na ndị bi na UK toro eto na ụmụaka na-eri oke nri ma na-eri oke shuga, amaara m na ị ga-enweta shuga iji malite na ike ahụ dị elu. Anyị ga-agwụcha shuga ngwa ngwa ọ ga-ahapụ ike gwụrụ ma gbaa mmiri, ugbu a nwere ike iburu ya nye gị, mana Abraham olee otu ị ga-esi eme ụwa ọzọ M na-ebelata shuga ọ dịkarịrị mfe ikwu karịa ime na ị bụ ezigbo shuga n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ọ dị na mkpụrụ osisi ọ dị na akwụkwọ nri mana ndị nọ na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị mma nke mere na ọ dị oke mma ịnwe ha mana n'ihe gbasara mbenata shuga ọ dị mgbagwoju anya mana ọ dabara nke ọma na NHS nwere ezigbo akụkọ banyere isiokwu a nke e bipụtara na nri nwere ọtụtụ shuga na otu esi egbutu ya.
Ihe m ga - eme bụ ịhapụ gị njikọ gị na nkọwa dị n'okpuru ebe a ma ana m ekwe gị nkwa ma ọ bụrụ na ị gụọ nke a, m ga - abụ shuga shuga, ọ dị mma ka anyị wee rie nri mana ugbu a, ka anyị lee isiokwu ndị ọzọ anya. Ajụjụ ole na ole a na-ajụkarị ndị ọrịa m bụ: you na-emega ahụ? Ọ bụrụ n ’ịrarụ ụra n’ehihie ma werekwa ọgwụ ọ bụla ma ọ bụ ọgwụ mkpuru akwụkwọ n’ihi na ụfọdụ n’ime ha nwere ike ibute ike ọgwụgwụ, ka anyị gaa n’ihu, yabụ chee maka oge nke abụọ enwere m mkpụrụ ọgwụ na ọ bụ ọgwụ anwansi ọnọdụ gị ga-abụ nke gị Mee ka ogo ụra dịkwuo elu ọ ga - eme ka ike gị dị elu ọ ga - ebelata ihe egwu gị nke ụfọdụ ọrịa dịka ọrịa obi, ọrịa shuga na ọtụtụ ndị ọzọ na nke kachasị mma ọ nweghị mmetụta ọ bụla ma ọ bụ ugbu a enwere onwe ya ọgwụ a anaghị adị mwute ma echere m na ọ bụrụ na ọ dị otú ahụ , onye ọ bụla nọ n'ụwa ga-ewere ya, tinyere m. Ọ dị mma ndị enyi m.
Aha ọgwụ anwansi a bụ mmega ahụ, ụjọ na - atụ m na ọ dịghị nfe ị aụ ọgwụ m ga - enye gị ka ị jiri wee were ọgwụ anwansi ma ọ bụrụ na ị dabara ya, ị ga - enweta uru niile m kwuru na ha ha niile na-adị ire. Ya mere, gbalịa itinye ya na usoro ị na-eme kwa ụbọchị ma jiri ya mee ihe. M ga-ahapụkwa ozi ndị ọzọ na nkọwa ahụ, biko cheta na ọ dịghị otu nri, gụnyere nri ndị a na-akpọkarị, nke nwere ike imeju nri na-adịghị mma.
Onweghi ihe akaebe obula na otu nri nwere ike ime ka ike gi di ike, nke otutu mmadu achoghi ihe ntinye vitamin iji bulie ogo ha ike, ma enwere ike inweta ihe a niile site na nri zuru oke. Ugbu a enwerekwa ihe gbasara ahụike nke nwere ike ibute ike ọgwụgwụ ma ọ na-atụ aro ka ị gwa dọkịta gị banyere ya, m ga-ahapụ ndepụta zuru ezu na nkọwa dị n'okpuru ebe a, m ga-akwado onye ọ bụla gụọ ya Cheta mgbe niile na ị dị oke. Enwere m olileanya na ndụmọdụ m na-arụ ọrụ ma aga m ahụ gị n'izu na-abịa.
Nke a bụ ezigbo ọrụ nka na-aga ugbu a. Echere m na unu niile nwere ekele maka na echere m na m rutere n'ezie na m na-eme ihe mmewere ebe a enwere m ọgwụ mgbochi dị ka nnukwu ihe nkiri na-enweghị nsọtụ site n'ụzọ Bradley Cooper hụrụ nwa okorobịa ahụ bụ Bradley Cooper n'anya ma ọ bụrụ na ị lelee edemede a, abụ m onye na-anụ ọkụ n'obi nke v fan egetables na ihe oriri e wusiri ike wusiri ike si ebi ndụ n'ọnụ ọgụgụ ise ugbu a, anyị maara na hey ụmụ okorobịa ekele maka ikiri n'izu a isiokwu
Imega ahụ ọ̀ na-eme ka ike gwụ gị?
Mmeganakwa mmanke gihie ụra, ya bụrụ nagịhie ụramma,gịkulie na-enwe ume.Gịga-abụike gwụrụna ụbọchịị na-emega ahụya meregịga-ehi ụraỌzọn'olu dara ụda.22.01.2016
Yabụ kedu mgbatị ahụ gabigara ókè? N’ezie, ọ dabere n’ihe ndị dị ka afọ ndụ gị, ahụike gị, na ụdị mmega ahụ ị họọrọ. Mana n'ozuzu, ndị okenye kwesịrị ịdị na-eji nwayọọ eme ihe dị ka awa ise n'izu, ma ọ bụ awa abụọ na ọkara ma ọ bụ karịa nke ịrụsi ọrụ ike, ma ọ bụ njikọta nke abụọ, dị ka CDC si kwuo. Ma nnyocha na-egosi na ịrụ ọrụ gabiga nke ahụ anaghị eme ka uru ahụike gị dịkwuo elu Nnyocha na-eju anya chọpụtara na ndị na-agba ọsọ na-agafe agafe nwere ihe ize ndụ nke ọnwụ karịa ndị na-adịghị emega ahụ.
N’ụzọ dị ịtụnanya, ụfọdụ ndị gbara ọsọ ọsọ ọsọ karịa ugboro atọ n’izu nwere ihe egwu yiri nke ọnwụ dịka ndị na-agba ọsọ. Gba ọsọ mgbe niile nwere mmetụta na-adịghị mma. Nnukwu ntachi obi dị ka ultramarathons nwekwara ike imebi obi, nkụchi obi, na ịba ụba akwara na ụfọdụ ndị mmadụ.
Ndị ọkachamara kwenyere na ntachi obi dị ukwuu na-eme ka usoro obi obi dị oke mkpa. Otu nnyocha e mere gosiri na imega ahụ́ gabigara ókè nwere ike ịgbanwe obi, mee ka mgbidi akwara dịrị n’ahụ́, meekwa ka akpụkpọ ahụ mebie. Nnyocha ọzọ gosiri na ụmụ nwanyị anaghị enwekarị nkụchi obi ma ọ bụ ọrịa strok ma ọ bụrụ na ha na-emega ahụ dịkarịa ala otu ugbo n’izu.
Ma ihe ize ndụ nke nkụchi obi na ọrịa strok amụbaala kwa ụbọchị na ụmụ nwanyị na-emega ahụ. Yabụ enweghị uru dị na mmega ahụ gabiga oke karịa mmega ahụ na-agabigaghị oke, ọ nwere ike bụrụ ihe egwu karịa. Womenmụ nwanyị na-ekpughere otu ihe egwu maka ndị a na-akpọ 'Female Athlete Triad'.
Ihe ndị a gụnyere ịhụ nsọ, ịhụ nsọ, ịkpụkpụkpụ azụ, nsogbu ọgịga, na nsogbu iri nri. Ihe mgbaàmà a na - ewetakarị site na ijikọta igbochi ọgwụ na calorie. Kedu ka a ga-esi belata libido, nke ga-ekwe omume n'ihi ike ọgwụgwụ anụ ahụ na nke na-ebelata ogo testosterone.
Maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, ịuseụbiga mmanya ókè na-eme ka ohere nke ị ofụbiga mmerụ ahụ dị ka tendonitis na mgbawa ike ọgwụgwụ. Ihe ọjọọ ndị a na-esi na trauma ugboro ugboro. Usoro mgbochi gị nwere ike ịta ahụhụ.
Ọ bụ ezie na imega ahụ́ n’ụzọ kwesịrị ekwesị pụrụ ime ka usoro ahụ́ gị ji alụso ọrịa ọgụ, usoro mmega ahụ́ gabigara ókè pụrụ ọbụna igbochi ya. Mgbe mmega ahụ siri ike, enwere ihe dị ka awa iri asaa na abụọ mepere emepe maka imebi emebi. N’ikpeazụ, nke a pụtara na nje na nje nwere ike ịba ngwa ngwa ibunye ahụ mmadụ.
Ndị na-eme egwuregwu na-emega ahụ gabigara oke ahụrụkwa ọrịa ndị na-efe efe karị. Ya mere, anyị maara na mmega ahụ gabigara ókè nwere ike ịnwe mmetụta dị egwu n'ahụ gị, ọkachasị obi gị, akwara, akwara, na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Ihe ruru otu nde mmadụ na US, ị addictionụ egwuregwu na-emebi ụbụrụ ha.
Mgbaàmà nke iri ahụ mmega gụnyere iwepụ. Nke ahụ bụ mgbe ị na-echegbu onwe gị ma ọ bụ ike gwụ gị mgbe ị na-atụ uche mgbatị na njikwa ma ghara inwe ike belata mgbatị ahụ ọbụlagodi na ị maara na ọ ga-emerụ gị ahụ. Ugbu a ihe dị mkpa ịghọta bụ na ị gaghị akwụsị ịkwụsị mmega ahụ.
Isi ihe bụ iji nweta ego kwesịrị. Ya mere, nweere onwe gị, gaa n'ihu ma gbaa ọsọ! Naanị oge niile.
Gịnị mere obi anaghị adị m mma mgbe m na-emega ahụ́?
Ahụhụ ọgbụgbọ n'ogemgbatịbụ ihe nkịtị, a pụkwara ịkọwa yammega ahụ- ọgbụgbọ ọgbụgba. Ihe na-eme bụ nke a: Ka ịmalitemmega ahụ, ahụ gị na-eme ka ọbara si n’afọ gị pụọ gaa rịa n’akwara gị na akpụkpọ gị.
Kedu ihe na-akpata oke ike ọgwụgwụ mgbe emechara ahụ?
Ike na-agwụkarị mmadụmgbeogologo ma ọ bụ siri ikerụpụta. N'ozuzu, nke a na-eme n'ihi na ike gị agwụla n'ike. Usoro ụjọ gị nke etiti na-efunahụ ikike ya ịnọgide na-emegharị akwara gị. Nke ana-akpataakwaraike ọgwụgwụ, na-eme ka ike gwụ gị.Ọnwa Isii 26. 2020bọchị 2020
Kedu ihe kpatara ike gwụrụ m ngwa ngwa mgbe m na-arụ ọrụ?
Ma ị na-amalitena-arụ ọrụ simaka oge mbụ ma ọ bụ na ị bụ ọkachamara na-eme egwuregwu, akwaraike ọgwụgwụbụ nkịtị mmetụta nkemmega ahụnke ahụ nwere ike ime ka ị kwụsị ọrụ ị na-arụ.Ike ọgwụgwụbu uzo ahu gi si eme ka ammausoro na ime ka ị mara na ị ruru oke oke metabolism gị.Eprel 16 2012
Kọfị ọ bụ ezigbo mgbatị ahụ?
Mgbe ụfọdụ ị chọrọ onye amara agbam ume nke ike tupu arụpụta. Ọ bụ ezie na nhọrọ dị ọtụtụ, otu n'ime ewu ewumaka-rụpụtaụọ ihe ọ .ụ .ụbụ kọfị. Nnukwu caffeine na ọnụ ala,kọfịna-eme maka ihe onunu dị irè iji meziwanye arụmọrụ.Mar 30 2021
Gịnị mere ike ji agwụ mmadụ ma ọ bụrụ na ọ na-eme ihe siri ike?
Ma ịdịmalite naọrụapụ maka oge mbụ ma ọ bụ gịdịọkachamara na-eme egwuregwu, akwaraike ọgwụgwụ bụnkịtị mmetụta nkemmega ahụnke ahụ nwere ike ime ka ị kwụsị ọrụ ị na-arụ.Ike ọgwụgwụbu uzo aru gi si eme ka ogha mma mana-emeị maara na i ruru gị metabolic / psychological ịgba.Eprel 16 2012
Gịnị bụ mmega ahụ na-akpata ike ọgwụgwụ?
Okwu Mmalite.Mmega-kpatara ike ọgwụgwụ(EF) bụ mbelata nke ike akwara afọ ofufo na-esite na nke siri ike na ogologo ogemmega ahụ(Gandevia, 2001). EF bụ ihe dị mgbagwoju anya nke metụtara ma akụkụ ma etiti.Jenụwarị 25. Ọkt 2018
Ogologo oge ole ka m ga-a coffeeụ kọfị tupu ịmalite ọrụ?
Oge na onunu ogwu makacoffeeụ kọfị tupukarụpụta
Ọtụtụ nnyocha na-egosi na ịkwesịrị ị drinkụ kọfịgburugburu 45-60 nkeji tupummega ahụikwe kakafiiniji banye n'ime ọbara gị ma rute oke kachasị elu (2).Mar 30 2021
Kedu ihe kpatara ike gwụrụ m na ngwụcha mgbatị ahụ?
’Re na-agbanye ume ma na mberede, ọkara site na mgbatị gị, ike ọgwụgwụ na-abịakwasị gị. Dị ka akwụkwọ akụkọ bụ́ Active si kwuo, “ọ na-eme ka ike ọgwụgwụ gwụchaa, ma ọ bụ nwee nchekasị, ma ọ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka ike gwụ mmadụ, ma ihe kpatara na ike gwụrụ ya bụ enweghị ígwè dị n'ọbara, ọnọdụ a maara dị ka anaemia.”
Kedu ụzọ kachasị mma isi nagide ike ọgwụgwụ n’oge mgbatị?
Na nke a, ị na-enye ahụ gị otu ihe dị ike nke ihe oriri na ike ọgwụgwụ na-alụ ọgụ iji nye ume na elekwasị anya, wetara oke ọbara na-asọba n'uru gị maka ezigbo nnyefe nri, yana ịkpụ ahụ gị maka mgbake.
Gịnị mere m ji enweta ume dị ukwuu n'oge mgbatị ahụ?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịkwụsị pound na ị na-eso nri obere carb, enwere ezigbo ohere na ị gaghị eri carbs zuru ezu iji nwee ike site na mgbatị gị. Dr. Isi Li kwuru, sị: 'Isi ihe na-enye ahụ mmadụ n'ahụ n'oge mgbatị ahụ bụ glucose, shuga dị mfe nke sitere na carbohydrates.